June 26, 2020 - Khitalin Media
အပျိုတွေဖြစ်ရက်နဲ့ အိမ်ထောင်သည်ယောက်ျားကိုမှ စွဲလန်းကြရတဲ့အကြောင်းရင်း (၅) ချက်
June 26, 2020 Khitalin Media 0
အပျိုတွေဖြစ်ရက်နဲ့ အိမ်ထောင်သည်ယောက်ျားကိုမှ စွဲလန်းကြရတဲ့အကြောင်းရင်း (၅) ချက် ခုနောက်ပိုင်း အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာ တော်တော်များများမှာ အပျိုလေးတွေက ဗီလိန်ဖြစ်နေတာကို အားလုံးလည်း တွေ့မြင်ရမှာပါ။ ဘာကြောင့် အပျိုတစ်ယောက်က ရုပ်ရည်လည်းရှိရက်သားနဲ့၊ ပညာအရည်အချင်းလေးလည်း ရှိရဲ့သားနဲ့ အိမ်ထောင်သည် ယောက်ျားကိုမှ သိက္ခာအကျခံပြီး တွဲနေရလဲဆိုတာ အားလုံးသိချင်နေတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းလေးတွေရဲ့အဖြေကိုတော့ အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ […]
အမေ့ဆီ မပို့ဖြစ်လိုက်သော လစာငွေလေး
အမေ့ဆီ မပို့ဖြစ်လိုက်သော လစာငွေလေး မပို့ဖြစ်လိုက်သော လစာငွေလေး သို့…..အမေ အမေတို့ မိသားစုတွေ နေကောင်းကြလါး?သားလဲကျန်းမာစွာဖြင့် တိုင်းပြည်တာဝန်တွေကို ဦးလည်မသုန် ထမ်းဆောင်နေပါတယ် အမေ… ညီလေးနဲ့ညီမလေး စာတွေကောလိုက်နိုင်ရဲ့လားအမေ…ကျနော်က သားကြီးသြရသ ဖြစ်ပီး အမေတို့နဲ့ ခွဲခွာသွားရတါကို အပစ်မတင်ပါနဲ့နော် … အမေသား အမေဆီ လစာမှန်မှန်ပို့ပေးတယ်နော်အမေ […]
ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားသူတွေ အားလုံးနီးပါးမှာ တွေ့ရတဲ့ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာ ( ၇ )ခု
ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားသူတွေ အားလုံးနီးပါးမှာ တွေ့ရတဲ့ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာ ( ၇ )ခု (၁) အလုံးအကျိတ်များ သို့မဟုတ် အနာများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း အရေပြား နဲ့ ရင်သားကင်ဆာများမှာ တွေ့ရပါတယ်။ရင်သားနဲ့ချိူင်းအောက်တွင်မာကျောသောအဖုများစမ်းမိခြင်း၊ အရေပြားတွင်အကွက်များဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ အလုံးအကျိတ်တစ်ခုရဲ့အလည်တည့်တည့်တွင် အနာစိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ မွေးရာပါအမှတ်ရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန် သို့ အရွယ်ပြောင်းလဲခြင်း (၂)နာတာရှည်ချောင်းဆိုးခြင်း အဆုတ်ကင်ဆာရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပြီး […]
လိုကျရှာနတော ကွာပီ ဖတျဖွဈအောငျ ဖတျပါ ( တနျဖိုး ရှိတဲ့စာ )
လိုက်ရှာနေတာ ကြာပီ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ပါ ( တန်ဖိုး ရှိတဲ့စာ ) စာဖတ်တာ မေ့သွားမယ့် တူတူ ဘာလို့ စာဖတ်ရတာလဲ။ တစ်နေ့မှာ မြေးအဘိုးနှစ်ယောက် မြစ်ကမ်းဘေးမှာထိုင်ပြီး စကားပြောနေကြတယ်။မြေးဖြစ်သူက အဘိုးကိုမေးတယ်။”ဘိုးဘိုး… ဘိုးဘိုး နေ့တိုင်းစာဖတ်တာ.. ဘယ်လောက်မှတ်မိသလဲ။ မေ့သွားမယ့်တူတူ ဘာလို့ စာဖတ်ရတာလဲ”အဘိုးက မြေးကိုပြုံးပြပြီး […]
Fb ပျေါမှာ ပုံတငျကောငျးတဲ့ ညီမငယျမြား ကြျောမသှားကွပါနဲ့ဖတျဖွဈအောငျ ဖတျပေးကွပါ
လှတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း ကြွားချင်ပြီး မတင်လေနှင့် ဝါသနာ အရပါဆိုပြီးလည်း မိမိ ပုံတွေကို မိမိ အကောက်ထဲမှာအလွဲသုံးစား မတင်လေနှင့် Like & comments တွေလိုချင်ရုံနဲ့ ထပ်ကာထပ်ကာ မတင်လေနှင့် Facebook ဆိုတာကိုဘာမှတ်လဲ အထင်သေး မစောလိုက်ပါနဲ့ အုန်း….. ညီမလေး တို့ရဲ့ ဂုဏ်သေက္ခာ တွေ […]
ခြောက်တာ မဟုတ်ပါ ကောလဟလ ဖျန့်တာ မဟုတ်ပါ မယုံရင် ကျနော့ကို လာမေးနိုင်ပါတယ်။ ကျနော် ခုပြောသမျှ ကြုံနေရသူတွေနဲ့ ပေးတွေ့ပါ့မယ်။ Ok ပြောပြပါ့မယ် ခုတလော ဝက်တွေ ခြံလုံးကျွတ် ဖျားနာ သေတာ ရန်ကုန် အနီးတဝိုက်နဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ဖြစ်နေတာ ခပ်စိပ်စိပ် ဖြစ်လို့နေကြောင်းသိရပါတယ်။ […]
‘ကိုယ့်ကို စိတ်ကုန်သွားတဲ့ ချစ်သူ မိမိထံအမြန်ဆုံး စိတ်ပြန်လည်လာစေမယ့် အစီရင်’
ချစ်သူ က မိမိကို ချစ်ကြိုက်ပြီးမှ အဆက်အသွယ်ဖြတ်သွားလို့စိတ်ညစ်နေပြီလား ….? ချစ်သူက အတည်တကျ လက်ထပ်မယ်ပြောဆိုပြီး တာဝန်မယူပဲထားသွားခြင်းကိုခံနေရပြီလား ….? အိမ်ထောင်သည် ယောင်္ကျား မယားငယ် ယူထားလို့ အိမ်ရှင်မများ စိတ်သောက ရောက်နေပြီလား ….? လိုအပ်တာကတော့ ….. – စတီးပန်ကန်ပြား ၁ချပ် ဆန် […]
”ဒီဆေးကို ညအိပ်ရာမဝင်ခင် စတီးဇွန်း (၃) ဇွန်းစာ ညတိုင်းသောက်၊ သင်သေတဲ့အထိ လေမဖြတ်ဘူဆိုတာ လုံးဝအာမခံတယ် ဆိုတဲ့ ဆေး”
၁။ ဆင်တုံးမနွယ်အစို လက်တစ်ညိုတစ်ဆစ်ဖြတ် (ငါးကျပ်သားခန့်) ကို ၄ ခြမ်းခွဲပြီးထည့်ပါ။ ၂။ ရေကျက်အေး သို့ သောက်ရေသန့် (ငှက်ပျောဖူး ပုလင်း ၂ ပုလင်း) (1.5 L) ၃။ ဆားတစ်ဇွန်း (လက်ဖက်ရည်ဇွန်းအသေး) (ဆားများပါက သွေးတိုးသမားများအတွက် မကောင်းပါ။) ၄။ ထန်းလျက် […]
သူမရဲ့ ဖခင်ရေးဆွဲထားတဲ့ အမေစု ပန်းချီကားချပ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဖြေရှင်းလာတဲ့ ချစ်သုဝေ
သူမရဲ့ ဖခင်ရေးဆွဲထားတဲ့ အမေစု ပန်းချီကားချပ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဖြေရှင်းလာတဲ့ ချစ်သုဝေ ကျွန်မဖေဖေရေးဆွဲသော ပန်းချီပုံတစ်ခုနှင့်ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်ပြောဖို့ ရှိလာပါသည်။အဲဒီနေ့က လူထုခေါင်းဆောင် အမေ့မွေးနေ့။ ကျွန်မဖေဖေက မွေးနေ့ပန်းချီကား တစ်ချပ် ဆွဲထား၍ ဖေဖေ့အိမ်သို့ သွားပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်က ကျွန်မတို့ ပန်းချီကားနှင့် အမှတ်တရမွေးနေ့ဆုမွန်တောင်းဖို့ပါ။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်က […]